Cayaaryahanka Vincent Enyeama - BBC Somali
Cayaaryahanka Vincent Enyeama
Laga soo bilaabo markii loo arkay inuu yahay goolhayaha ugu wanaagsan qaaradda Afrika, Vincent Enyeama waxaa hadda sidoo kale loo arkaa inuu ka mid yahay kuwa Yurub ugu wanaagsan.
Sidii uu ugu ciyaaray kooxda Faransiiska ee Lille sanadkii hore waxay xoojisay sumcaddiisa taariikh fiican ayayna u sameysay.
Laacibkan 32-jirka ah ee reer Nigeria waxaa uu qabtay 11 ciyaarood oo isku xiga oo aan wax gool ah laga dhalin tartanka Ligue 1 qaybtii hore ee xilli-ciyaareedkkii 2013-14.
Guud ahaan, waxaa uu gaaray 21 kubbadood inuu celiyo xilligii la soo dhaafay – taas oo uusan qaban goolhaye kale oo ka tirsan shanta tartan ee Yurub ugu sarreeya.
Waxaa uu astaahilay aqoonsi kaddib markii uu bishii May noqday goolhayihii ugu horreeyay ee tartanka French Ligue 1 ay u magacaabaan ciyaartoyga Afrika ee sanadka.
Waxaa uu ciyaar wanaaggiisii ula sii gudbay tartankii koobka adduunka ee sanadkan lagu qabtay Brazil, isagoo goolal badan badbaadiyay afar ciyaarood – waxaana loo magacaabay goolhayaha 4aad ee ugu fiicnaa tartankaas.
Number-ka 1aad ee quruxda badan ayuu aad uga muuqdaa gooshiisa cusub si aad u wanaagsan ayuuna xilligan ku bilaabay, tartanka French Ligue 1 iyo kan Europa League labadaba.
Haddana waqti badani kama soo wareegin markii wanaagga Enyeama la yareystay –inkastoo weel ballaaran oo billado uga buuxaan.
Waxaa uu si xiriir ah ugu guulaystay tartanka horyaallada Afrika sannadihii 2003 iyo 2004 oo dalka Nigeria uu u ciyaarayay Enyimba kaddibna waxaa uu wax ka qaaday koobka Israeli league iyo laba koob oo kale oo uu la qaaday kooxda Hapoel Tel Aviv.
Waxaan kaloo la hilmaami Karin tirada goolasha uu dhaliyay Enyeama oo ah 23 intii uu joogay kooxaha waaweyn ee Israel, oo ay ku jiraan rigooreyaal iyo laadad xor ah.
Guulaha uu u soo hooyay Hapoel waxay ugu dambaystii soo jiidatay naadiyada dalalka Spain, Portugal, Turkey, Russia iyo Ukraine sanadkii 2011, laakiin waxaa uu ka doortay kooxda Faransiiska ee Lille.
Si kastaba ha ahaatee, ku wareegiddaasi si fiican uma dhicin waxaana uu markiina ku soo noqday Israel si uu noloshiisa ciyaareed u badbaadiyo August 2012, hase ahaatee markan deyn ayaa lagu siiyay kooxda Maccabi Tel Aviv oo ah mid ay aad isu-neceb yihiin Hapoel.
Imaatinkiisii waxaa lagala hortegay olole nacayb ah oo taageerayaasha Hapoel ay la beegsadeen qoyskiisa iyagoo ka caraysan suurta galnimada inay ka badiso kooxdii ay cadawga ugu weyn isu- ahaayeen.
Markii dabaysha cadaawaddu iska degtay, Enyeama waa uu ku bullaalay shaarka kooxda Maccabi.
Waxaa kaloo uu caddeeyay kaalinta uu waddankiisa ugu jiro maadaama ay ku guulaysteen koobkii qaramada Afrika ee sanadkii 2013 lagu qabtay dalka South Africa waxaana uu ku guulaystay goolhayaha ugu fiican tartankaas.
Guulo kale ayaa ku xigay isagoo kooxda Maccabi ka caawiyay inay sanadkii 2013 qaaddo koobka Israeli League iyo Cup double.
Gool badbaadin la yaab leh iyo iskala bixin ayaa mar kale uu soo bandhigay tartankii 2013 ee Fifa Confederations Cup ee dalka Brazil lagu qabtay waxayna taasi u soo jiidday in Enyeama ay dib ugu yeerato kooxda Lille.
Soo noqosho guul leh ayay u ahayd goolhayaha waaya-aragga ah, oo gaaray heerkii ugu sarreeyay taariikh ciyaareedkiisa.
Isagoo noqday Nigerian-kii ugu horreeyay ee k u guulaysta abaalgudka Marc-Vivien Foe ee waddanka Faransiiska, Enyeama waxaa kaloo uu noqon karayaa goolhayihii ugu horreeyay ee ku guulaysta abaalgudka BBC ee ciyaartoyga Afrika ee sanadka.